Apple kama quusto ku dhawaaqista sharci -darrada mashruuca DACA | Waxaan ka imid mac
Apple kama quusto ku dhawaaqista sharci -darrada mashruuca DACA
Tim Cook iyo agaasimayaasha kale ayaa isu yimid si ay Congress -ka u weydiiyaan saxaan go'aankooda ay ku mamnuucayaan mashruuca DACA. Waxay rabaan suurtogalnimada bixinta dhalashada in loo ansixiyo waxa loogu yeero "riyoodayaasha." Mashruuc uu Tim Cook ku lug lahaa tan iyo markii la aasaasay. Ayaa taageeray, oo la kabay (shaqaalaysiiyay 250 ka mid ah muhaajiriintan) oo la difaacay ka hor maamulka Trump oo ugu dambayn ku guulaystay inuu ku dhawaaqo sharci darro.
In ka badan 90 agaasime guud, oo uu ku jiro Tim Cook -ka Apple, ayaa ku boorrinaya Congress -ka inay meel mariyaan sharci siinaya waddada dhalashada dhallinyarada muhaajiriinta ah ee sida sharci -darrada ah lagu keenay Mareykanka. Sundar Pichai oo ka tirsan Google, Andy Jassy oo ka tirsan Amazon, Brad Smith oo ka tirsan Microsoft iyo kuwo kale oo badan, agaasimayaasha guud waxay wax ka qoraan xukunkii dhowaan ay soo saartay Maxkamadda Degmada Mareykanka ee Koonfurta Gobolka Texas ee ku saabsanaa barnaamijka Tallaabada Dib Loo Dhigay ee Carruurta Imaata (DACA).
Xukunka maxkamadda degmadu wuxuu jebinayaa dhalanteedka iyo mustaqbalka kuwa loogu yeero riyoodayaasha al barnaamijka ayaa lagu tilmaamay sharci darro. In kasta oo kuwa horeyba u joogay ciidda Ameerika, ay hoos timaaddo mashruuca DACA aysan jirin cawaaqib xumo aad u badan, looma oggola inay shaqeeyaan laakiin waxay joogaan dalka. Haa waxaa jira dhammaan kuwa doonayay inay helaan mustaqbal ka wanaagsan calankaas.
Agaasimayaasha guud ee shirkadahan waaweyn waxay ka codsanayaan Congress -ka inay meel mariyaan sharci cusub. In ay siin karto muwaadinimo dhammaan kuwii hore u joogay dalka. Waxay rabaan in mashruuca dib loo soo celiyo, laakiin waa inay talaabo talaabo u qaadaan. Waxay rabaan kan ugu horreeya, si loo hubiyo waddo kuwa ku sugan ciidda Ameerika ay u qalmaan inay noqdaan muwaadiniin. Waxay taas ugu doodayaan in aysan ahayn waxa saxda ah oo kaliya in la sameeyo, laakiin ay faa’iido dhaqaale oo weyn u tahay Mareykanka.
Saxiixayaasha warqadda ayaa rajeynaya in marka la helo dowladda cusub ay wax is beddeli doonaan. Erayada kale, kuwa uu xusay madaxweynaha hadda Joe Biden waxaa lagu xusay: “Dhallinyaradan waxay qayb ka yihiin dhismaha qarankeenna waxayna muhiim u yihiin mustaqbalkeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple kama quusto ku dhawaaqista sharci -darrada mashruuca DACA
Apple waxay xireysaa kanaalka Slack gudaha ee ay adeegsadaan shaqaaluhu si ay ugala hadlaan ku noqoshada xafiiska
Macsyada cusub iyo tixraacyada Apple Watch ayaa ka muuqda keydka Eurasian